Kedu mgbe Rize-Artvin Airport ga-amalite ọrụ? | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyBlack Sea Region08 ArtvinKedu mgbe Rize-Artvin Airport ga-amalite ọrụ?
Kedu mgbe Rize-Artvin Airport ga-amalite ọrụ?
07 / 01 / 2020 08 Artvin, 53 Rize, General, Ụgbọelu, Black Sea Region, Ụzọ Awara Awara, Isi akụkọ, Turkey
rize artvin ọdụ ụgbọ elu ọkara
Ministry of Transportation na Infrastructure 766 hectare na atumatu olu ntọala tọrọ site 2,5 afọ gara aga, Prime Minister Recep Tayyip Erdogan, Turkey si 2nd ọdụ Rize- wuru na oké osimiri na-egbo 52 percent nke Artvin Airport gwụchara.
N'ime arụmọrụ nke Rize-Artvin Airport, nke ndị Ministri Ingbọ njem na akụrụngwa wuru ala dị hekta 766 na Yeşilköy, mpaghara Rize nke Pazar ma Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan tọgbọrọ n'April 3, 2017, a rụrụ nde tọn nde.266 maka ala hekta 88,5. okwute ka eji. N’ebe a na-ebufe gwongworo 150 na ehihie na abalị, oke osimiri na-aga n’ihu. Na mgbakwunye na gwongworo, a na-ejikwa ụgbọ mmiri nchekwa abụọ. Ihe dị ka tọn puku ton abụọ kwa ụbọchị na-ejupụta n'ọdụ ụgbọ elu ahụ, usoro a na-agbanye n'okporo ụzọ na-aga n'ihu. Ejiri gwongworo na-ebugharị Kanlımezra, nke dị kilomita 2 site na ebe ọrụ ahụ na okwute Tektaş, kilomita 120 site na okporo ụzọ ahụ.
Nkume gwuru gwongworo maka ụgbọ mmiri igwu mmiri na-agbada n’ime oke omimi nke mita 28. Mpaghara ahụ dị n'ime ahụ ga-adị ihe dịka mpụga nari nde 2 na ngụkọta mmiri ga-eju nde abụọ na narị puku anọ. Pasent 2 nke ọrụ a agwụla, na -egbucha ma na-emejupụta ihe n’okporo ụzọ awara awara, apron na taksi ụzọ na March 400 na ntọala, sub-base na mkpuchi mkpuchi na-ezube ịmalite. Na-atụ anya ka nde mmadụ 52 ga-eji ya rụọ ọrụ ihe owuwu ụzọ ụgbọ elu Rize-Artvin kwa afọ, ọ ga-efu nde ijeri naịra 2020.
Rize na Artvin Airport na ọnụ ọgụgụ nke ụkọ n'ụwa, Turkey nke abụọ ọdụ ụgbọ jupụta n'oké osimiri. O nwere oke juju ebe niile ruru puku nde abụọ na narị puku isii. A ga-eme nde nde 2 nde 600 n'ọdụ ụgbọ elu. Iji rụọ ọrụ a ihe dị ka igwe 85 na-arụ ọrụ awa 500.
Ntinye nke ọdụ ụgbọ elu Rize-Artvin na njem njem ga-abụkwa nnukwu ihe. Thegbọ elu ọdụ ụgbọ elu, Oke Osimiri Ojii ga-adị mfe ịnweta. Azụmaahịa, ụgbọ njem, lọjistik, mpaghara ahụ ga-enwe ọtụtụ ọrụ. Emechara Ovit Tunnel, nke e chere na ọ ga-agbakwunye n'ọdụ ụgbọ elu. Portyidere ọdụ ụgbọ mmiri na-ebido afọ a. Ngwaahịa East na South East ga-erute ọdụ ụgbọ mmiri na ọdụ ụgbọ elu na İyidere n'oge dị mkpirikpi karịa oge mbụ. Site ebe a, a na-ezube ụgbọ njem, njem na azụmaahịa maka mba Caucasian na Asia.
Emulsion Production, mkpuchi mkpuchi na Kaplama
3. Kedu mgbe akwa ga-abata n'ime ọrụ
Kedu mgbe mpaghara Konya-Karaman-Mersin YHT ga-abata?
89% nke Citizensmụ amaala chọrọ ịzụ ụgbọ ala
RayHaber Ozi Ntanye 07.01.2020